Caqabadaha haysta Waxbarashada Degmada Qardho oo lasoo bandhigay. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Caqabadaha haysta Waxbarashada Degmada Qardho oo lasoo bandhigay.
Caqabadaha haysta Waxbarashada Degmada Qardho oo lasoo bandhigay.
June 13, 2019 - By: Mohamud Nadif
Ururka Dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee arimaha bulshada ee lagu Magacaabo YUSA ayaa Magaalada Qardho ku qabtay kulan lagu soo bandhigayo Caqabadaha iyo fursadaha Waxbarashada Qardho , ururka ayaa soo jeedintiisa ku saleeyay 4 qodob iyo hal lifaaq, waxayna si gaar ah uga doodeen hanaanka ay ku socoto waxbarashada hoose, dhexe iyo sare.
Waxay tilmaameen in si wayn ay isugu milmeen malcamadihii quraanka iyo dugsiyadii waxbarashada maadiga ah, maqnaansha goobaha ay ardaydu dugsiyada sare ku sameeyaan praticalka , Maktamadaha oo aad ugu yar Magaalada. Cariiriga fasalada iyo in mararka qaar ay arday tira badan ay dhigtaan fasalada. YUSA waxay walaac ka muujisay ardayda xiliyada soo dhawaynta loo kaxeeyo oo ay sheegeen in dhibaato tira badan ay kasoo gaarto.
Gudoomiyaha YUSA Saleebaan Bashiir Ciise wuxuu shegay in talo soo jeedintaan ay gogol dhig u tahay dadaalo ay rabaan in ay ku saxaan xafiisyada dawlada iyo kuwa arimaha bulshada ka shaqeeya. Ugu danbayn wuxuu Gudoomiyaha Waxbarashada Degmada Qardho Saciid Maxamed Faahiye gudoonsiiyeen Nuqulo talo soo jeedin ah.
Qaar ka mid ah Macalimiinta Magaalada Qardho oo kulankaan kazoo qaybgalay waxay qireen jiritaanka caqabada ay soo bandhigeen dhalinyarada YUSA, waxay sheegeen in qaarkood ay horsed u tahay in maamul adag uusan wadanka ka jirin, kuwa kalena ay u baahanyihiin in laga gaaro xal.
Gudoomiyaha Waxbarashada Degmada Qardho Saciid Maxamed Faahiye oo gabagabadii ka hadlay kulanka wuxuu tilmaamey in dhamaan caqabada lasoo gudbiyay ay yihiin qaarkood kuwa ay si dhaw Wasaaradu ula socoto, qaar ka midana wuxuu tilmaamey in ay waxkaqabshadoodu bilaw tahay guulna laga gaari doono. Gudoomiyuhu wuxuu ururka YUSA ku amaanay dadaalka ay wadaan. Wxuuna sheegay in ay yihiin ururkii ugu horeeyay oo talo soo jeedin intay soo qoraan lasoo wadaaga.